Umugqa wokukhiqizwa kokudla kwezinja okwenziwa inja nekati ukudla,inja ukudla pellet umugqa
1.Umugqa wokukhiqizwa kokudla kwezilwane zasanyama wenziwa ikakhulukazi ngohlelo lokwelapha izinto ezingavuthiwe ,uhlelo lwe-extrusion, uhlelo lokomisa, uhlelo lokunambitha kanye nesistimu yokulawula.
2.umugqa wokukhiqizwa kokudla kwezilwane unokuqina okuphezulu nokusebenza okuzenzakalelayo, i-whice inikeza ithuba lokulawula ukwanda kwesibuko ngokusebenzisa izindlela ezahlukahlukene ukulawula ukuthungwa komkhiqizo wokugcina.
Umugqa wokukhiqizwa kokudla kwezilwane zasanyama wenziwa ikakhulukazi ngohlelo lokwelapha izinto ezingavuthiwe ,uhlelo lwe-extrusion, uhlelo lokomisa, uhlelo lokunambitha kanye nesistimu yokulawula, umugqa wokukhiqizwa kokudla kwezilwane unokuqina okuphezulu nokusebenza okuzenzakalelayo, i-whice inikeza ithuba lokulawula ukwanda kwesibuko ngokusebenzisa izindlela ezahlukahlukene ukulawula ukuthungwa komkhiqizo wokugcina. Yonke imishini yenziwa ngensimbi engenacala, umugqa wokukhiqizwa kokudla kwenja unokwakhiwa okucatshangwayo nange-automation ephezulu; izikulufa zenziwa ngensimbi ye-alloy, ngesakhiwo sebhulokhi yokwakha kanye nomsebenzi wokuzihlanza.
Mayelana nokukhiqizwa kokudla kwezilwane ezifuywayo
* Ukulawulwa okuqondile kwamapharamitha we-process kanye ne-automation ukuqinisekisa ikhwalithi yegranule eyenziwe kahle: i-gelatinization, ukunwetshwa, ukuthungwa kanye nekhwalithi engaguquki. Lezi zindlela zekhwalithi zingatholakala ngoba ama-screws aqinisekisa ukucubungula okungenamsoco nokumpompa okuhle. Ukucutshungulwa kokunameka kwe-viscous akuxhomekile kungxabano phakathi kwezikulufa nomgoqo. I-othomathikhi yokulawula amazinga okushisa okushisa okuzenzakalelayo kanye nezinhlelo zokulungisa zezinja zokudla zezinja, okulungiselelwe kwesikulufa sesikulufu nesivinini sesikulufa kuhlelwe kalula futhi kufaka isandla ekusebenzeni kokukhiqizwa kokudla kwenja ephezulu.
* Intelligent pet yokukhiqiza ukudla : ukuphathwa kokupheka (ukuqopha, finyelela, ukugada), ukuphathwa kwenqubo (qala / yeka), izinzwa ezifakiwe, ukulawula nokunakekela. Ukushintshwa kwemigqa ethuthukisiwe kufaka isandla ezindlekweni eziphansi zokusebenza futhi kusiza ukukhiqizwa okungaguquki.
* Ukwakheka kobuciko nokuqedela ngokusebenzisa izinto ezikhethekile zokufa ukudala ukwakheka okusha kanye nemikhiqizo efakwe ngumbhalo ohlukile (co-extruded) ,Ukuguquguquka okuyingxenye ukucubungula uhla olubanzi lwezinto zokusetshenziswa ezinokuqukethwe kwamafutha aphezulu lapho kudingeka.
* Ukwehliswa kwesondlo komugqa wokukhiqizwa kokudla kwezinja, usebenzisa izingxenye ezijwayelekile zokwenza izinto ezingekho kanye nezomiswa, ukufinyelela okulula kwezingxenye zomshini ezahlukahlukene.
* Ikhono lomugqa wokukhiqizwa kokudla kwezinja: 100 kg / h kuya 1,000 kg / h
Ishadi eligelezayo lomugqa wokukhiqizwa kokudla kwenja :
Ukulungiselela isistimu yezinto ezibonakalayo eluhlaza okokusebenza → Uhlelo lokuxuba → Uhlelo lokufaka → I-Drying system
Ngemininingwane emininingwane ,sizofanisa umugqa wokukhiqizwa kokudla kwenja ngokuya ngesidingo samakhasimende
Esikunikezayo ukukhiqizwa kokudla kwezilwane zasekhaya
1.) Isevisi yokubonisana ngaphambili, ngesikhathi,nangemva kokuthengisa;
2.) Ukuhlelwa kwephrojekthi kanye nensiza yokwakhiwa kwe-pellet line yezinja;
3.) Ukulungisa iphutha lemishini kuze kube konke kusebenza;
4.) Ukuphathwa kokuhamba okude kwesitshalo sokudla kwezilwane zasekhaya kusuka efektri yomthengisi kuya endaweni eqanjwe ngumthengi;
5.) Ukuqeqeshwa kokulungiswa kwemishini nokusebenza mathupha;
6.) Izindlela ezintsha zokukhiqiza namafomula;
7.) Nikeza 1 iwaranti ephelele kanye nensizakalo yesikhathi sokuphila.
Ividiyo yomugqa wokukhiqizwa kokudla kwenja
khetha ulimi lwakho EnglishAfrikaansالعربيةမြန်မာစာNederlandsFrançaisDeutschहिन्दी; हिंदीBahasa IndonesiaItaliano日本語한국어PortuguêsРусскийEspañolKiswahiliภาษาไทยTürkçeTiếng ViệtisiXhosaisiZulu